SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲဂျာမန်ဝေငှ | Data Recovery
နေအိမ် → SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲဂျာမန်ဝေငှ
RescuePRO® software ကို download လုပ်သင့်ရဲ့အခမဲ့ activation တည်ဆောက်အောက်ကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပေးပါ:
1. အောက်တွင်ရှေးခယျြ, သင့်ရဲ့ SanDisk ကဒ်နှင့်အတူဖြစ်သောကူပွန်ကိုသင် Extreme.
>>>>စကားရိပ်: အဆိုပါဘောက်ချာRescuePRO®သို့မဟုတ်RescuePRO® Deluxe ဖြစ်စေလို့ပြောပါလိမ့်မယ်, အညီရှေးခယျြ.
**** သင်တစ်ဦးကူပွန် SSD ကိုRescuePRO®ရှိပါက, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ2. သင်၏ operating system နှင့်တွေ့ဆုံဘို့ရွေးချယ်ထားကူပွန်အောက်ကခလုတ်များ၏တဦးတည်းကို select ပေးပါ.3. ယင်းစစ်ဆေးပါ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် activation code ကိုသင့်ရဲ့ RPRID serial number ရယူဘို့သင့်ညွှန်ကြားချက်.** ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: သင်တစ်ဦးအမှတ်စဉ်နံပါတ် RescuePro Deluxe များအတွက်ဘောက်ချာခဲ့လျှင်, နှင့်RPRID-0305,
အဆိုပါနံပါတ်စဉ်, သင့်ရဲ့ဘောက်ချာပေါ်ပုံနှိပ်သော, သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်မှားယွင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်.သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏အ RPRID ဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်-0305 ရှိုးများပေးရမညျ. SanDisk အစားထိုးအရေအတွက်ရရှိရန်. **